Siminaar loo furay shaqaale ka tirsan wasaaradda warfaafinta – idalenews.com
Siminaar loo furay shaqaale ka tirsan wasaaradda warfaafinta
Siminarkan oo lagu baranayo habka taxanaha TV-ga, tayeynta muqaalada wararka, barnaamijyada iyo sidoo kale kaydidinta ayaa manta loo furay shaqaale ka tirsan wasaaradda warfaafinta waxaana ka qeyb galay munaasabada furitaanka tababarkan ka qeyb galay mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta.
Simanarkani ayaa waxaa bixindoona khabirro Soomaaliyeed oo ku xeel dheer tayeynta hawlaha TV-ga iyo kaydintiisaba, waxaana aqoonyahanada bixin doono ay yihiin kuwo iskood isku xil qaamay si ay aqoontooda uga faa’ideyaan shaqaalaha ka howlgala TV-ga Qaranka Soomaaliyeed.
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta C/risaaq Cali Yuusuf “Bahlaawi” oo hadal ka jeediyay furitaanka siminaarka ayaa uga mahad celiyay aqoonyahanada isku xilqaamay in ay aqoontooda uga faa’ideeyeen shaqaalaha wasaaradda warfaafinta.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo gaadiidka xukuumadda Soomaaliya C/shakuur Cali Mire ayaa tilmaamay in howlwadeenada TV-ga ay faa’ido weyn u tahay.
Wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta gaadiidka cirka iyo dhulka ayaa wadday muddooyinkii u dambeeyay dadaallo lagu horumarinayo aqoonta iyo xirfadda howlwadeenada wasaaradda gaar ahaana waaxda warbaahinta.
Mariniska dalka Sweden oo ku soo biirayo Hawlgalka Atlanta Operation ee La-dagaalanka Burcad-baddeeda Soomaalida